इनरुवा अस्पतालको १९ लाख बढी हिनामिना - inaruwaonline.com
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन २२, २०७५ समय: २०:१५:११
सुनसरी सदरमुका इनरुवामा रहेको इनरुवा अस्पतालको १९ लाख बढी रकम हिनामिना भएको तथ्य फेला परेको छ । बिरामीले तिरेको रकम इन्ट्री गर्ने कार्यमा खटिएका कर्मचारीले सेवा वापत तिरेको रकम बैंक दाखिला नगरी स्वयं हिनामिना हुँदै आएको भेटिएको हो ।
अस्पतालको आम्दानी वापतको १९ लाख ३९ हजार ५ सय ५६ रुपैंया हिनामिना भएको पाइएको छ । इनरुवा अस्पतालको रकम हिनामिना मात्र भएको छैन् । हिनामिना गरिएको सरकारी रकम फिर्ता गर्नुको साटो कम्प्युटर सिस्टममा राखिने डाटा इन्ट्रि मेटाएर रकम पचाउने परिपञ्च समेत रचिएको फेला परेको छ ।
हिनामिनामा संलग्न सबै इनरुवा अस्पतालका करारका कर्मचारी हुन् । जसले अस्पतालको आम्दानी वापतको दिनभरको रकम संकलन गरी बैंक दाखिला गर्नुको साटो आफुखुशी खर्च गर्दा अस्पताल प्रशासनले आर्थिक भार समेत झेल्नु परेको छ । इनरुवा अस्पतालको काउण्टरमा ५ जनाले बिल काट्छन् । ५ चै जनाले भिन्नाभिन्नै युजर आइडी प्रयोग गर्छन् । प्रत्येकले आफ्नो आइडीमा संकलन भएको रकम अस्पतालको खातामा जम्मा नगरी आफैं चलाउने गरेको भेटिएको हो ।
अजय प्रधान ३ लाख ६९ हजार ५ सय २१,कबिता पोदारको नाममा ४ लाख ९१ हजार ८ सय ३ रुपैयां, सरु भट्टराईको नामको १३ हजार ६ सय ९७ र विकेश श्रेष्ठको नाममा असार मसान्तयता १० लाख ६४ हजार ५ सय ३५ बक्यौता देखिएको छ ।
आयुषी शाक्य र सरु भट्टराईको नाममा समेत लाखौं रकम लामो समय बक्यौता रहेकोमा असार मसान्त सम्ममा शाक्यको हिसाब चुक्ता भएको देखिन्छ भने सरुको नाममा केही बक्यौता अझ बाँकी छ ।
अन्यको नाममा रहेको बक्यौता मध्ये केहीहद सम्म फिर्ता गरिएपनि पूर्ण चुक्ता भने हुन नसकेको इनरुवा अस्पतालले जनाएको छ । विकेश श्रेष्ठ करारकै कर्मचारी हुन् । जसले विल काउण्टर इन्चार्जको काम गर्दै आएका छन् । लेखा फाँटले दिएको तथ्याङकका अनुसार विकेश एक्लैको नाममा १० लाख बढी रकम बक्यौता छ ।
यद्यपी विकेश भने आफ्नो नाममा त्यत्रो रकम बाँकी नभएको दावी गर्छन् । श्रेष्ठले आफुहरुबाट गल्ती भएको स्विकारेपनि घटनालाई सामान्य बताएका छन् । उता अस्पतालको लेखाफाँटको जिम्मेवारी सम्हाले पश्चात खर्च तथा आम्दानी केलाउने क्रममा हिनामिना सहितको त्रुटी फेला पारेका श्रवण घिमिरेले विल काउण्टर र आफुहरुको रेकर्ड मेल नखाएको बताए ।
अस्पतालको आम्दानी वापतको ठुलो रकम हिनामिना हुँदा अस्पताल सञ्चालनमा समेत कठिनाई भोग्नु परेको बताउने घिमिरेले केही कर्मचारीको मनपरितन्त्रका कारण सबै कर्मचारी र सिङगो अस्पताल बदनाम हुन पुगेको बताए । पटक पटक विभिन्न विषयले विवादमा मुछिने गरेको इनरुवा अस्पतालको पछिल्लो घटनाक्रमले आफुलाई थप आजित तुल्याएको मेसु डा. विना शाक्यको भनाई छ । आम्दानी र खर्चको तालमेल नमिलेपछि कर्मचारीको गल्ती पकडिएकाले उनिहरुका सवालमा कार्वाहीको प्रकृया थालिने डा. शाक्यले बताइन् ।